Wararka - Maxay simahaygu si lama filaan ah ugu qaylinayaa?
Muxuu sariirteydu si lama filaan ah u qeylinaysaa?
Jingnai Makiinado waa shirkad cilmiyaysan iyo tiknoolajiyadeed oo isku dhafan R&D, wax soo saar iyo ganacsi. Shirkaddu waxay ku taal magaalada Liaocheng, gobolka Shandong. Waxaan bixin karnaa tayada P0 tayada leh (Z1V1), P6 (Z2V2), P5 (Z3V3). Shirkaddu waxay kasbatay ISO9001: 2008 iyo IATF16949: shahaadada nidaamka 2016. Waxaan had iyo jeer soo saarnaa saxnaan sarreeya iyo waxqabadyo sarreeya. Waqtigan xaadirka ah, jaangooyooyinkeenna waxaa lagu dhejiyay macaamiil fara badan oo gudaha iyo dibaddaba ah, oo loo dhoofiyo Midowga Yurub, Koonfurta Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo 30 dal oo kale.
Si loo wanaajiyo caannimada, shirkadeennu waxay ka soo qaybgashaa bandhigyo badan oo adduunka ah sannad kasta, waxaanan sii wadaynaa inaan kaqeybqaado kalfadhi kasta oo ka mid ah bandhig xirfadeed oo caalami ah oo shanghai ah, soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha shiinaha, bandhigga gawaarida caalamiga ah ee Beijing, Shanghai Frankfurt qaybo ka mid ah bandhigyada iwm .
Ku soo dhowow baaritaankaaga iyo dalabkaaga. Mahadsanid!
Laga bilaabo Diseembar 09-12, Shirkadeennu waxay ka qayb geli doontaa Bandhigga Warshadaha Caalamiga ah ee Shiinaha ee Shanghai, Booth No waa 3HD094, soo dhaweyso macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Laga bilaabo Diseembar 2th ilaa Diseembar 5th ee 2020, shirkadeena waxay kaqeyb qaadataa Automechanika Shanghai ， Booth No. 1.1H91, ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Laga bilaabo Nofeembar 24th ilaa 27th ee 2020 shirkadeena ayaa kaqeyb qaadan doonta Bauma CHINA 2020, Booth No waa N3686.ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwii horeba inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Laga soo bilaabo Diisambar 3th ilaa Diseembar 6th ee 2019, shirkadeena waxay kaqeyb qaadataa Automechanika Shanghai ， Booth No. 1H91 & 8.1A30 waxay soo dhaweyneysaa macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Nofeembar 9-12, 2019 Waxaan Tehran ku tagi doonnaa Exibition Exibition Expoition, waab lambarkiisu waa 3844/2, waxaan soo dhaweynaynaa macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Nofeembar 5-7, 2019, Waxaan ka qeyb galaynaa AAPEX SHOW (Las Vegas, NV), lambarka waabku waa 8431-9, ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Oktoobar 23，2019-Oktoobar 26 Oktoobar, 2019, shirkadeena ayaa soo bandhigtay Bandhigga PTC ASIA Shanghai 2019.
Qolkeena Maya: D4-5, HALL E6. ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Laga bilaabo Oktoobar 15th ilaa 19th ee 2019 shirkadeena waxay kaqeyb qaadan doontaa kal-fadhiga 126aad ee Canton Fair, Booth No: 8.0J14 & 6.0A17 .waxaa lagusoo dhaweynayaa macaamiisha cusub iyo kuwii horeba inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Waxaan kaqeyb galnay Moscow International Motor Show 26 - 29th, Aug, 2019, qolkeena Maya.: HALL8.3 G231-1. Ku soo dhowow macaamiisha cusub iyo kuwii horeba inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan
Waxaan kaqeyb galnay PHILIPPINES AUTO PARTS inta lagu guda jiro Jul 24th, 2019 - Jul 26th, 2019, iyo qolkeena No.: 403. Ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Laga bilaabo Juun 10-keeda ilaa 12-keeda, 2019, shirkadeena ayaa ka qeyb gali doonta bandhigga qaybaha gawaarida ee Frankfurt ee dubai. Lambarka waabku waa sa-j38.ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwii hore si ay u soo booqdaan una gorgortamaan.
Abriil 23-27, 2019, shirkadeena ayaa ka qaybqaadan doonta Bandhigga Ganacsiga ee Gawaarida Gawaarida ee Brazil (Sao Paulo). Waab Maya: P156. Ku soo dhowow macaamiisha cusub iyo kuwii horeba inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Laga bilaabo Abriil 15th ilaa 19th ee 2019 shirkadeena waxay kaqeyb qaadan doontaa kal-fadhiga 125aad ee Canton Fair, Booth No is7.1D46 .ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay soo booqdaan oo ay gorgortamaan.
Dhalitaanku waa qaybo muhiim u ah qayb kasta oo ka mid ah mishiinnada wareegaya. Shaqadooda aasaasiga ahi waa inay taageeraan wiishka wareegaya halka ay yareynayaan khilaafaadka si loo fududeeyo dhaqdhaqaaq habsami leh.
Iyada oo ay ugu wacan tahay doorka muhiimka ah ee jihada ay ka ciyaareyso mashiinnada, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo baaro jihadaada wixii arrimo ah, iyadoo la hubinayo in dayactirka lagu qabtay jadwalka.
Shan calaamadood oo aad ku beddelayso dhalmada ka hor inta ay goori goor tahay
Haddii aad ogaatid in dhalmadaadu si lama filaan ah u noqotay buuq, waxa laga yaabaa inaad la yaabban tahay waxa socda. Waa maxay sababta sicirkaagu u sameynayo buuq maxaadna ka qabanaysaa?
Akhriso si aad u ogaato sababaha dhalista buuqa iyo tillaabooyinka xiga ee ay tahay inaad qaado.
Maxaa sababa dhalista inay buuq yeelato?
Haddii qaadistaada ay si lama filaan ah u bilaabeen inay dhawaq sameeyaan inta lagu guda jiro hawlgalka, dhibaato ayaa ka taagan samayntaada. Sawaxanka xad dhaafka ah ee aad maqleysid waxaa la abuuray markii waddooyinka qotomiyuhu ay waxyeello soo gaadho, taas oo keenaysa in waxyaalaha is rog-rogaa ay boodaan ama hoos u dhacaan inta lagu jiro wareegga.
Waxaa jira sababo badan oo kala duwan oo keena buuq badan laakiin kuwa ugu badan waa faddarayn. Waxay noqon kartaa faddaradaas inay dhacday intii lagu jiray rakibidda qalabka, iyadoo ay jiraan waxyaabo ku haray waddada orodka oo waxyeelo geysatay markii ugu horreysay ee qalabka la waday.
Gaashaammada iyo shaabadluhu way waxyeelloobi karaan inta lagu jiro saliidda dhalidda, taasoo ka dhigaysa kuwo aan waxtar u lahayn ka hortagga soo gelitaanka wasakhda - dhibaato gaar ah oo ka jirta deegaanno aad u sumeysan.
Faddaraynta sidoo kale waa wax caadi ah inta lagu gudajiro hawsha saliidda. Qaybaha ajaanibta ah ayaa laga yaabaa inay ku dhegaan dhamaadka qoriga dufanka waxayna galaan mashiinka inta lagu jiro dib u soo celinta.
Qaybahaas ajnabiga ah waxay ka dhigayaan waddooyinka tartanka ee sita. Markay dhalintu hawlgalka bilawdo, qaybtu waxay bilaabi doontaa inay dhaawacdo wadada lagusoo gaadho, taas oo keenaysa in waxyaalaha is rog-rogaya ay soo boodaan ama ay jabaan oo ay abuuraan buuqa aad maqleysid.
Maxaad sameyn laheyd haddii culeyskaagu bilowdo inuu buuq sameeyo?
Qaylada ka imaanaysa sidkaaga waxeey u ekaan kartaa foorida, gariir ama gariir. Nasiib darrose, markii aad maqasho shanqadhkan, adkayntaada ayaa ku fashilantay xalka kaliya ee jirana waa in la beddelo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah
Waxaa laga yaabaa inaad ogaato in dufanka lagu daro kuleylkaaga uu aamusinayo buuqa. Taasi waxay ka dhigan tahay in arrinta la xalliyey, sax?
Nasiib darrose, sidaa maahan. Ku darista dufanka markii dhalmadaadu ay bilaabeyso inay buuq yeelato waxay qarinaysaa oo kaliya arrinta. Waxay u egtahay inaad malaasto dul dhigtay boogta mindida - waxay u baahan tahay feejignaan deg deg ah dhawaquna wuu soo laaban doonaa uun.
Waxaad u adeegsan kartaa teknoolojiyada kormeerka xaaladaha sida falanqaynta gariirka ama heerkulbeegga si aad u sii saadaaliso goorta ay u egtahay in cilladdu ku fashilanto masiibo ahaan iyo inaad xisaabiso barta ugu dambeysa ee aad si badbaado leh ugu beddeli karto dhalista.
*Sida looga hortago dhalista guuldarada
Waxay noqon kartaa tijaabin inaad kaliya bedesho culeyska fashilmay oo aad sii wadato howlaha ganacsi ee maalinlaha ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in aan kaliya la beddelin dhalmada laakiin sidoo kale in la raadsado sababta asalka u ah fashilka. Samaynta falanqaynta sababta asalka ah ayaa aqoonsan doonta arinta salka ku haysa, taas oo kuu ogolaaneysa inaad dhigto talaabooyin yareyn ah si looga hortago isla arintaas inay dib u dhacdo.
Hubinta inaad isticmaalayso xallinta xalka ugu waxtarka badan ee xaaladahaaga hawlgalka iyo hubinta xaaladda shaabbadahaaga mar kasta oo aad dayactir sameyso waxay kaa caawin kartaa inaad ka ilaaliso soo-galista wasakhda.
Waxa kale oo muhiim ah inaad hubiso inaad u isticmaalayso qalabka saxda ah ee ku habboon saa'idkaaga. Tani waxay gacan ka geysan doontaa in laga hortago in waxyeello dhacdo inta lagu jiro howsha sii kordheysa.
* La soco sicirkaaga
Si joogto ah u kormeerida saa'idkaadu waxay ku siinaysaa fursadda ugu wanaagsan ee aad si dhakhso leh u aqoonsan karto waxna uga qaban karto arrimaha suurtagalka u ah qaadashadaada. Nidaamyada kormeerka xaaladdu waa hab fiican oo lagu ilaaliyo caafimaadka mashiinnadaada dib-u-eegis joogto ah.
JINGNAI, waxaan ku siineynaa qalabka SKF ee qalabka kormeerka xaaladaha, laga bilaabo qalabka loo yaqaan 'stroboscopes' iyo dareemayaasha gariirka ilaa nidaamyo kormeer xaalad buuxda leh oo si habsami leh ugu dhex jira mashiinkaaga kormeerka fog.
* Qaado farriinta guriga
Haddii culeyskaagu si lama filaan ah u noqday buuq inta lagu jiro hawlgalka, horay ayuu u fashilmay. Weli way awoodi kartaa inay shaqeyso hada laakiin waxay kusii dhowaanaysaa kuna sii dhowaaneysaa fashilka masiibada. Sababta ugu badan ee dhalida buuqa waa faddarayn waxyeello u geysata jidadka tartanka ee dhalista, taas oo keeneysa in waxyaalaha is rogaya ay ka soo boodaan ama ay dhaqaajiyaan.
Xalka kaliya ee dhalida buuqa waa in la badalo dhalista. Dalbashada dufanka waxay qarinaysaa oo keliya arrinta.